MACLUUMAADKA TARANKA EEYAHA EE AUSTRALIA LABRADOODLE IYO SAWIRRO - EEYAHA
Macluumaadka Taranka Eeyaha ee Australia Labradoodle iyo Sawirro
'Nina the Australian Labradoodle oo jira 8 bilood. Nina waa qof aad u qeexan! Way cod dheer tahay, waxay jeceshahay inay salaaxdo oo had iyo jeer waxay ruxaysaa dabadeeda.
Fiiro gaar ah: waxaa jira seddex nooc oo kala duwan oo Labradoodle ah oo hada la dhaqdo: Labraduudka Australiyaanka ah ayaa lagu dhashaa Australia, Australian Labradoodle ayaa lagu dhaqaa USA iyo American Labradoodle .
Labradoodle-ka Australiyaanka ah ayaa ku soo barbaaray Australia oo ay aqoonsan yihiin Labradoodle Association of Australia iyo International Australian Labradoodle Association, Inc., ayaa lagu dhajiyay hadaf ah in la abuuro eey saafi ah. Ma cadda inta ay Australiyaanku ka yimaadeen horumarkooda.
The American Labradoodle waa eey iskujiray, oo lagu dhajiyay isgoyska Poodle leh Labrador dib u habeyn .
Bixiyeyaasha qaarkood waxay ugu yeeraan jiil-jireedyo kala duwan Labradoodles Australian Labradoodles (mararka qaarkood waxaa jira noocyo kale oo isku dhafan marka laga reebo Shaybaarka iyo Poodle ). Labradoodles badan-jireed ayaa ah kuwo iskutallaab ah oo ka duwan kuwa ay daadiyeen naadiyada Australia.
Eeyaha lagu sawiray qaybtan macluumaad waa Australian Labradoodles oo lagu barbaaray Australia, iyadoo ujeedadu tahay abuuritaanka eeyo saafi ah. Markaad laxiriirto abuure iibiya Labradoodles Australia, hubi inaad weydiiso nooca Labradoodle ee ay leeyihiin.
Halkan guji halkaan Heerka Labradoodle ee Australia eeyaha ay daaqayaan naadiyada dalka Australia.
Labradoodle-ka Australia wuxuu ku wanaagsan yahay carruurta waana yahay tababar fudud . Waxay la jaanqaadaysaa eeyaha kale. Waa xariifnimo badan, Bulsho oo farxad leh, oo dhaqso u baranaya hawlo aan caadi ahayn ama gaar ah. Firfircoon, xoogaa maad ah mararka qaarkood, waxay isku dayi kartaa inay ka xoog badiso milkiilaheeda haddii edeb la'aan . Aad bay muhiim u tahay inaad tahay eeygan adag laakiin deggan, hogaamiye xirmo joogto ah oo isaga sii jimicsi maskaxeed iyo jimicsi maalinle ah ku iska ilaali arrimaha dhaqanka . Saaxiibtinimo, in kastoo ay iska cadahay inuu daacad u yahay qoyskiisa, eeygan ma ahan mid dagaal badan.
bakoorad coe ah oo lagu qaso pitbull
Heerka: Dhererka 22 - 24 inji (53 - 60 cm)
Heer: Dheddigga Miisaanka 45 - 60 rodol (20 - 27 kg) Ragga 55 - 77 rodol (25 - 35 kg)
Gunta yar: Dhererka 17 - 22 inji (44 - 56 cm)
Yar: Miisaanka 30 - 50 rodol (14 - 25 kg) labka ayaa ka weeyn.
HD, PRA, VonWilabrands, xusulka iyo cudurada patella.
Labradoodle-ka Australia wuxuu ku fiicnaan doonaa guri dabaq ah haddii uu helo jimicsi ku filan. Waxay dhex dhexaad ka yihiin gudaha waxayna ku fiicnaan doonaan ugu yaraan deyr dhexdhexaad ah.
jack russell terries isku dhafka ah
Noocani wuxuu u baahan yahay jimicsi badan, oo ay ka mid yihiin socod dheer maalinle ah .
Qiyaastii 13-15 sano
Qiyaastii 4 ilaa 10 eey yaryar, celcelis ahaan 8
Koodhadhka curly waxay u baahan yihiin qurxin joogto ah oo burush jilicsan ugu yaraan labadii usbuucba mar ah laga yaabee laba ilaa seddex jeer sanadkii, googoyn, maqas ama jarjar si loo ilaaliyo nadaafadda. Inta badan Labradoodles-ka Australia waxay daadiyaan wax yar timo la'aan waxayna u badan tahay inaysan xasaasiyad lahayn.
Tusaalahan caadiga ah ee isweydaarsiga macquulka ah iyo qorshaynta waxaa laga abuuray waddanka Australia sannadihii 1980-meeyadii. Ujeedada naadiyada Australiya waa inay abuuraan 'nooc' cusub oo leh astaamaha ugu wanaagsan ee asal ahaan asal ahaan. Ujeeddada Wally Conron waxay ahayd inay soo saarto eeyo gargaar ah oo aan timaha daadin (dadka xasaasiyadda ku leh). Eeyaha haga Australia Labradoodle si guul leh ayaa loo tababaray oo la geeyay Australia iyo Hawaii, laakiin wali sifooyinka aan daadinta ahayn ee 'Poodle Standard' ma noqonin cashuur go'an. Labradoodle-ka Australia wuxuu ku bilaabmay iskutallaab fudud oo udhaxeysa Labrador dib u habeyn iyo Poodle-ka caadiga ah ama Poodle Guntin welina si ballaaran ayuu uga socdaa Waqooyiga Ameerika. Australiyaanku, dhanka kale, waxay ka qaadeen Labradoodle dhawr talaabo oo dheeraad ah. Bartamihii-2004 waxaa lagu dhawaaqay in Labradoodle-ka Australia uusan ahayn oo keliya iskutallaabta Labrador x Poodle laakiin uu ahaa nooc ka mid ah xuquuqdiisa oo la soo saaray sanado badan iyadoo ujeeddooyin gaar ah maskaxda lagu hayo. Si loo gaaro himilooyinkaas, horumarin dheeri ah ayaa lagu sameeyay iyada oo la adeegsado faleebada waalidka ee lagu daro khadadka iskutallaabta ee Labrador x Poodle oo durba ubaxaya Soosaarayaasha noocani waxay raadiyeen habka ugu wanaagsan ee loogu amaano nooca Labradoodle ee Australiyaanka ah, iyo inay horumariyaan astaamaha ay ka helaan oo jecel eeyahaas. Sannadkii 1997-kii ayaa aasaaskii ugu horreeyay ee Australian Labradoodle Breed Standard uu ka muuqday himilooyinkan. Labradoodle-ka Australia wuxuu hadda ka kooban yahay 6 nooc oo kala duwan asal ahaan. Noocyada waalidka la xaqiijiyay ee la ansixiyay ee 'Labradoodle' Australia waa Poodle (Heerka, Ghadafi, Toy, Labrador dib u habeyn , Isbaanishka Biyaha Isbaanishka , Ka Faa'iidaysiga Coat Coat , Isbaanish Mareykan ah iyo Ingiriis Cocker Spaniel .
IALA = International Australian Labradoodle Association, Inc.
'Nina waa mid dhexdhexaad ah oo yar oo Australia Labradoodle ah. Hadda waxay jirtaa 8 bilood. Iyadu waa qof aad u caqli badan, oo jecel, oo aad u dhif ah qaylo, oo waa qof aad u muujiya. '
Lahaanshaha sawirka Tegan Park Labradoodle Taranka iyo Cilmi baarista
Australian Labradoodles, waxaa iska leh sawirka Tegan Park Labradoodle Taranka iyo Xarunta Cilmi baarista, Yarragon, Australia
Lahaanshaha sawirka Rutland Manor Labradoodles
Lahaanshaha sawirka Tegan Park Labradoodle Taranka iyo Xarunta Cilmi baarista, Yarragon, Australia
Kani waa Zeb. Wuxuu ka yimid Rutland Manor oo ku taal Australia ilaa USA.
Zeb the Australian Labradoodle
Lahaanshaha sawirka Rutland Manor Labradoodles, breeder
Eeg tusaalooyin dheeri ah oo ah 'Labradoodle Australian' ah
Australia Labradoodle Sawirada 1
xadka collie iyo heeler
shaybaar madow iyo iskudhafka cowska
Terry jiir bunni iyo cadaan ah
khadka ugu fiican ee loo yaqaan 'pitbull bloodline' ee qoyska
cawl iyo caddaan bulldog Faransiiska